Sabotsy 11 Mey 2019. – FJKM
Sabotsy 11 Mey 2019.
« Mitandrema, miambena (= miareta tory ) ka mivavaha , fa tsy fantatrareo izay ihavian’ny fotoana »(and33) .
Baikon’i Jesoa Kristy izany eo am-piandrasana ny fiaviany indray:
-« Mitandrema » (miverina indroa) (and 23,33) : aoka ho malina sy mahina ianareo amin’ ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka » izay mitondra fampianaran-diso , mitaona ny olona na dia ny olom-boafidiny aza ho: « Indro , ety Kristy na indro ery , misarika ny olona ho amin’ny tsy finoana sy ny rehak’izao fiainana izao ka mety hiverin-dàlana na hanaotao foana.
-Miambena (miverina indroa) (and33,35) : aza variana anaty aizina , aza sondriana amin’ny olana samihafa ( fahoriana , aretina , fahasahiranana , tsy fahafaham-panadinana, ady , loza, fahadisoam-panantenana…) , miareta tory, mifohaza, miandrandrà ny lanitra ka amin’izay ny Zanak’olona dia ho hita avy eo amin’ny rahona amin’ny hery lehibe sy ny voninahitra (and 26).
Mitaona antsika i Jesoa Kristy eto hitandrina sy hiambina ka hivavaka , izany hoe : hifandray tsy tapaka amin’ny Tompo , hifamatotra sy hiantehitra ary hihavana amin’ Andriamanitra . Mety ho resin’i satana fahavalo (resin-tory) tokoa mantsy isika eo am-piandrasana izany , fandrao avy tampoka izy raha tsy miray amin’i Jesoa Kristy.